သက်ဝေ: ဆောင်း (သို့ ) ဒီဇင်ဘာ အလွမ်း
- December 1, 2008 at 3:22 PM
ဘဝနဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတစ်ထပ်တည်းဖြစ်ဖို့ကို ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
((အပြန်ခရီးမှာတော့ အလာခရီးနဲ့တခြားစီ။ သီချင်းသံတွေ တိတ်ဆိတ်ခဲ့ပြီ။ ဆူညံသံတွေလဲ နဲနဲအားပျော့ခဲ့ပြီ။ ရင်ခွင်တိုင်းမှာ အလွမ်းတွေအပြည့်နဲ့ …။ အငြင်းခံရလို့ အသဲကွဲတဲ့ သူတွေက ကွဲ…။ အသစ်စက်စက် အတွဲတွေကတော့ လက်ချင်း ဆုပ်ထွေး အနာဂတ် အရေးတွေး…။ ညမှောင်မှောင်မှာ ကျောင်းကြီးရှေ့ ကို ပြန်ရောက်.. ဆောင်းက မညှာမတာ အေးစက်နေပြီ…။ ဒါပေမယ့် ရင်ထဲမှာတော့ အပျော်နဲ့ ရောနေတဲ့ အလွမ်းတွေက ပူပူပြင်းပြင်း တောက်လောင်…။))
လွတ်လပ်စွာပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျောင်းသားဘ၀ကို ပြန်လည် အမှတ်ရစေခဲ့ပါတယ်။
tg.nwai December 1, 2008 at 5:56 PM
သက်ဝေရေ...ခုတလော အေးနေလို. ပထမနှစ် drawing lecture တန်းကို မနက်စောစောစီးစီးသွားဦးရတဲ့ နှင်းတောထဲက အာအိုင်တီကြီးကို သတိတွေရနေတာ..သက်ဝေရဲ ဒီဇင်ဘာအလွမ်းဖတ်လိုက်ရတော့.. တအား တအားကို...လွမ်းသွားတာပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေကိုရော..ကျောင်းကြီးကိုရော..။
မဇနိ December 1, 2008 at 6:37 PM
အမသက်ဝေ နောင်နှစ်ဆောင်းမှာ building6နား သွားထိုင်အုံးမှာလား။ အမအလွမ်းတွေက နိနိကိုပါ ကူးတယ်။ အမရေးချင်တဲ့ sweet december ကို လှလှလေး ရေးနိုင်ပါစေနော်။ တင်တင်အေးမုန့်ဟင်းခါးကို ပဲသီးတွေနဲ့ စားချင်စမ်းပါဘိ။
nu-san December 1, 2008 at 9:37 PM
မမသက်ဝေဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေပြည့်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် မရေ.. ကျနော်လည်း ဘာရယ်မဟုတ်ပေမယ့် အမနဲ့အတူ လိုက်လွမ်းရင်း ရန်ကုန်ကို ပြန်ချင်လာတယ်.. ဒီတဆောင်းတော့ ဒီမှာပဲ တွင်းအောင်းရလိမ့်ဦးမယ် အမရေ.. နွေဘက်မှ ရန်ကုန်ကို ပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်ပါရဲ့.. :)
သင်းနွယ်ဇင် December 1, 2008 at 10:25 PM
ရင်ထဲကဆန္ဒတွေအားလုံးမြန်မြန်ပြည့်ပါစေ။ ကျမလဲ သက်ဝေနဲ့အတူလိုက်လွမ်းမိပါတယ်။
PAUK December 1, 2008 at 10:35 PM
12~ 18 C လောက်တော့ရှိ်မယ်...
Kay December 1, 2008 at 10:43 PM
သက်ဝေရေ- အလွမ်းတွေ..နေရာတိုင်းမှာ တွေ့နေရပါလား။
လွမ်းသာလွမ်း။ လွမ်း ပြီးရင်း လွမ်း။း)
ခိုင်ထူး သီချင်းလေးလည်း သတိရတယ်။
strike December 2, 2008 at 5:18 AM
မိုက်တယ်ဗျာ ဒီတခါတော့။ရင်ဘတ်ထဲကို မျှားချွှန်ချွှန်နဲ့ပစ်စိုက်လိုက်သလိုပဲ။
Moe Cho Thinn December 2, 2008 at 11:59 AM
ဖတ်ရင်းနဲ့ လွမ်းလိုက်တာ ကဗျာလေး တပုဒ် ဖတ်ရသလိုပါပဲလား။
မိသားစု ဘုရားက အပြန်မှာ တင်တင်အေး မုန့်ဟင်းခါး စားကြတာလဲ တူတယ်။
မမတို့ကလေ့လာရေး ခရီး။ ချိုသင်းတို့က Field trip မို့ သူငယ်ချင်းနဲ့ အတူ ဂစ်တာတီးကြ၊ သီချင်းဆိုကြ၊ ခွဲရခါနီးတော့ လွမ်းရတဲ့အဖြစ်လေးတွေလဲ တူပြန်ပါရော။
မမ ဆန္ဒနဲ့ ထပ်တူ ဆုတောင်းပြည့်ပါစေလို့ ရင်ထဲက ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် မမရေ။
sonata-cantata December 2, 2008 at 6:24 PM
လွမ်းလို့ ကျန်ခဲ့တာကို အားနာပါဦး သက်ဝေ
GreenGirl December 3, 2008 at 7:31 PM
နှင်းတွေကျပြီး လွမ်းစရာလည်းကောင်းသလို ချစ်စရာလည်းကောင်းတဲ့ ဆောင်းရာသီဟ စင်္ကာပူနဲ့တော့ ဘာမှမဆိုင်သလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီဇင်ဘာက်ုရောက်ရင် ဆောင်းရာသီကို မမေ့နိုင်အောင် လွမ်းတယ်။း(
တန်ခူး December 3, 2008 at 9:19 PM
အလွမ်းတွေ ရင်ထဲမဆန့် တော့ဘူး…
ရေးတတ်လွန်းသူကြောင့် လွမ်းတတ်လွန်းသူလဲ မျက်ရည်ဝဲ…
ပြန်ပါ့လား သက်ဝေရယ်… ဒီနှစ်ပိတ်ရက်တွေ ကောင်းသားပဲကို…
တို့ ကတော့ မနေနိုင်လို့ပြန်တော့မယ်…
ဒီပို့ စ်လေးက မြန်မာပြည်ကျရင် ဒါတွေ လုပ်လိုက်လို့သတိပေးလိုက် သလိုပဲ…
သွားမယ် ရွေတိဂုံဘုရားကို… စားမယ် တင်တင်အေးမုန့် ဟင်းခါး…
ကျောင်းရှေ့ က တိုင်လုံးကြီးတွေနားမှာ လွယ်အိတ်လေး လွယ်ပြီး အလွမ်းဖြေကြည့်ဦးမယ်…
ပြီးတော့… စွယ်တော်လေးတွေ သက်ဝေအတွက် ခူးခဲ့မယ်နော်…
ဒီပို့ စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါသက်ဝေ…
khin oo may December 10, 2008 at 6:15 AM
အစ်မလဲ လွမ်းတယ် ။ :P
ThuHninSee December 10, 2008 at 1:35 PM
သက်ဝေ December 29, 2008 at 1:29 PM
ကိုဝင်းဇော်... ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်...
သိင်္ဂီ... ကျောင်းဖက်သွားဖြစ်ရင် ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်ပေးပါအုံးလေ.. နော်...
နိနိ နုစံ သင်းနွယ်ဇင် ချိုသင်း...ဆုတောင်းပေးတာကျေးဇူး...
ပေါက်... ချမ်းလဲချမ်းတယ် လွမ်းလဲလွမ်းတယ်ပေါ့...
မကေ.. အင်း.. ခုတလော နဲနဲလွမ်းနေမိတယ်...
Strike... မျှားက အသဲထဲအထိ ရောက်ရဲ့ လား...
တန်ခူး... နောက်နှစ်ပေါ့လေ... တန်ခူး ခူးလာမယ့် စွယ်တော်ရွက်လေးတွေကို မျှော်နေမယ်နော်... ကြည်အေးရဲ့စာအုပ်လဲ တန်ခူးကို ပေးဖတ်ဖို့အဆင်သင့်...
Greengirl မခင်ဦးမေ... တူတူလွမ်းကြတာပေါ့နော်...
မွန်မွန်... ရေးနေပါတယ်... အချိန်ရယ် အရှိန်ရယ် မရသေးလို့ ပါ...
T T Sweet April 7, 2009 at 9:56 PM
အဲလိုပဲခေါ်တော့မယ်နော် ... အပြင်မှာလဲ မတပ်ပြီးခေါ်တယ်လေ ... ဘယ်သူလဲဆိုတာ ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီး သိလိုက်ပါပြီ။ အပေါ်က ပို့စ်တစ်ခုကတည်းက ရိပ်မိနေတာ ...
အဲဒီခရီးသွားတုံးက တို့ကားပေါ်မှာ သီချင်းဆိုသေးတယ် ... မီးပုံပွဲမှာ တော်ဟန်ဝင်းကတာ ကွေးနေတာပဲလေ ... ... ဆရာချမ်းကလဲ မိန့်ခွန်းချွေသေးတယ်လေ ... လွမ်းစရာလေးတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ။
a ma thet wai, i also know who r u.alot of yr friend call u MN right? I saw yr photo from yr friend, u r so pretty.